Inkampani News-Hunan Zhonggu Isayensi Nobuchwepheshe Co., Ltd.
Company Izindaba Izindaba zemboni
Ingabe imishini yokuthengisa izoba umkhuba ngokuzayo?
Judging from the development trend of vending machines, it appears as a result of the transformation of labor-intensive industrial structure to technology-intensive society
UZoomgu wenza imizamo ebumbene yokulwa “nobhadane” !!!
Zama konke okusemandleni ukubhekana nesimo esibi kakhulu, Silwe "nobhadane"
Ungayikhetha kanjani imishini yokuthengisa?
Abasebenzisi abengeziwe bayathanda ukuthengisa imishini yomshini. Singayibona yonke indawo ezinxanxatheleni zezitolo, emapaki, ezikoleni nakwezinye izindawo. Kepha kunabakhiqizi abaningi bemishini yokuthengisa emakethe. Ungakhetha kanjani?
Imishini yokuthengisa exotic engama-30 emhlabeni, wake wakusebenzisa lokho?
Ngabe ucabanga ukuthi kukhona ukudla okulula kuphela emishinini yokuthengisa? Yiphutha elikhulu lelo, amakhekhe, amateki, izinkalankala, osikilidi, i-caviar, imigoqo yegolide… Okungalindelekile kuphela, okungatholakali.
Ukuthengisa okungagunyaziwe, yiziphi izinkinga izinkampani zomkhiqizo okufanele zikunake!
INongfu Spring, Wahaha, Want Want, Unification, Master Kong, Family Convenience, Jingkelong, Good Shop, kanye nomkhakha wezitolo ongagunyaziwe wanamuhla, uma kuqhathaniswa neminyaka ebandayo yeminyaka edlule, sezivele zigcwele yonke indawo, zinenzuzo eningi yokuhlinzekwa kwezinsiza nezinsiza zesiteshi.
Ikusasa lomshini wokuthengisa ongabhekiwe
Ngokuzayo, kunezinkomba ezintathu mayelana nokwenza ngcono nokuguqulwa kwemishini yokuthengisa njengebellows.
Isikhathi segolide semishini yokuthengisa siqala nje!
Ngemuva kweminyaka emithathu edlule, imboni yezitolo enganakiwe iye kancane kancane yaba "ezolile".
Imakethe ye-ayisikhilimu engu-123.9 RMB eChina!
Uma kuziwa ehlobo, ngicabanga ngesibhakabhaka esidwetshiwe ngamafutha endaweni exotic.